ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဒဂုံတောင် အမျိုးသမီးညီလာခံကို ကြိုဆိုဂုဏ်ပြု၍ လှူဒါန်းမှုများ ပြုလုပ် – ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဒဂုံတောင် အမျိုးသမီးညီလာခံကို ကြိုဆိုဂုဏ်ပြု၍ လှူဒါန်းမှုများ ပြုလုပ်
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဒဂုံတောင် အမျိုးသမီးညီလာခံကို ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ဒဂုံတောင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ဆင်းရဲနွမ်းပါး ပညာသင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအား တဖက်တလမ်းမှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသော လေးထောင့်ကန်ရပ်ကွက် ဇမ္မူအေးဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာသင်ကျောင်း(မူလွန်) ကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားနေသော ကျောင်းသူကျောင်းသားများအား လိုအပ်နေသည့်စာရေးကိရိယာများ၊ ဆရာတော်များအား ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူခြင်း၊ နေ့ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒန်းခြင်းကို ၂၇. ၉. ၂၀၁၈ ရက်နေ့နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ကျင်းပရာ ဒဂုံတောင်မြို့နယ်ဥက္ကဌေ်ဒ်ါစမ်းစမ်းဌေးနှင့် မြို့နယ်ကော်မတီဝင်များ ၊ ရပ်ကွက်အသီးသီးမှ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်ကွက်ဥက္ကဌနှင့်ကော်မတီဝင်များ၊ လူငယ်ရေးရာတာဝန်ခံ ဦးဇော်မင်းထွဏ်းနှင့် မြို့နယ်လူငယ်အဖွဲ့ဝင်များမှ လေးထောင့်ကန်ကျေးရွာမှ
တစ်နာရီလမ်းလျှောက်ရသော ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ခက်ခက်ခဲခဲ သွားရောက်၍ ကလေးများ၏ ပညာသင်ရေးအတွက် လိုအပ်သည်များ ကွင်းဆင်းထောက်ပံခဲ့ကြပါသည်။
← မဘိမ်းမြို့နယ်​ ပြည်​​ထောင်​စုကြံ့ခိုင်​​ရေးဖွံ့ဖြိုး​ရေးပါတီ၊ ပါတီဝင်​အဆိုပြုလွှာစု​ပေါင်း​ ပေးအပ်​ပွဲကျင်းပ
မန္တလေးမြို့ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ကံသာယာရပ်ကွက် သုတဘဏ်စာကြည့်တိုက်ရှေ့တွင် အောင်နိုင်ရေးဆိုင်းဘုတ်စိုက်ထူပွဲပြုလုပ် →
အသက် ​(၇၈) နှစ်​အရွယ်​ရှိ အဘိုးဦးရဲမြင့်​​ဆွေအား မန္တ​လေးတိုင်း​ဒေသကြီး ပြည်​​ထောင်​စုကြံ့ခိုင်​​ရေးနှင့်​ဖွံဖြိုး ​ရေးပါတီမှ ဂုဏ်​ပြုချီးမြှင့်​​
March 26, 2018 USDP 2016 Comments Off on အသက် ​(၇၈) နှစ်​အရွယ်​ရှိ အဘိုးဦးရဲမြင့်​​ဆွေအား မန္တ​လေးတိုင်း​ဒေသကြီး ပြည်​​ထောင်​စုကြံ့ခိုင်​​ရေးနှင့်​ဖွံဖြိုး ​ရေးပါတီမှ ဂုဏ်​ပြုချီးမြှင့်